अनलाइन ट्रेडिङ लागू भएपछि विदेशमा बसेर सेयर कारोबार गर्न के गर्नुपर्छ ? - hamro Desh
अनलाइन ट्रेडिङ लागू भएपछि विदेशमा बसेर सेयर कारोबार गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले आगामी कात्तिक २१ गतेदेखि पुर्ण अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली सुरु गर्दैछ । अहिले सेयर खरिद बिक्रीको अर्डर दिन दलालको कार्यालयमा पुग्नै पर्ने फोनबाट अर्डर दिँदा पनि खरिद बिक्री आदेश भर्न दलालकोमा जानै पर्ने व्यवस्था छ ।
अनलाइन कारोबार सुरु भए पछि यस्ता सबै समस्या समाधान भएर जाने छन् । केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीले लगानीकर्ताको डिम्याट खाता तथा बैंक खातालाई आफ्नो प्रणालीमा प्रविष्ट गराउँदै स्वचालित संयन्त्रको विकास गरे पछि मात्र स्वचालित रुपमा सेयर किन्दा बैंक खाताबाट पैसा काटिएर डिम्याट खातामा सेयर जम्मा हुनेछ । अहिले यो प्रकृया स्वचालित नभई म्यानुअल आधारमा गराइने बताइएको छ ।
अनलाइन कारोबार प्रणालीबाट सेयर किनबेच गर्न लगानीकर्ता सेयर दलालकोमा गएर एक पटक खाता खोल्नु पर्छ । उक्त बैंक खातामा डिम्याट खातालाई लिंक गराउनु पर्छ । यो प्रकृया एक पटक मात्र गरे पछि सेयर किनबेच गर्न सकिन्छ । कारोबारका दौरान हुने सबै कृयाकलापहरु सेयर दलालले नै सिष्टममा प्रविष्ट गरी प्रकृया पुरा गराउने छन् ।
लगानीकर्ताले इन्टरनेट भएको कुनै पनि स्थानमा बसेर आफुले चाहेको सेयर किन्न अनि बेच्न कम्युटर तथा मोबाइलको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । उनीहरुले सेयर खरिदबिक्री आदेश मात्र दिनु पर्ने हुन्छ । जुन व्यवस्था अब लागु हुने अनलाइन कारोबार प्रणालीमा हुनेछ ।
यसरी अनलाइन सेयर किनबेच गर्नका लागि लगानीकर्ताको बैंक खातामा पैसा तथा डिम्याट खातामा अनिवार्य रुपमा सेयर जम्मा भएको हुनु पर्छ । सेयर किन्ने क्रममा बैंक खातामा पैसा नभए स्वचालित प्रणालीले कारोबार गराउन सक्दैन । सेयर बेच्ने क्रममा पनि डिम्याट खातामा सेयर नभएको भए प्रणालीले पर्याप्त सेयर नभएको जनाउ दिँदै कारोबार हुन नसकेको जानकारी दिनेछ ।
सेयर दलालसँग नजिक भएका लगानीकर्ताको हकमा भने दलालले कारोबार लिमिट दिएको खण्डमा बैंक खातामा पैसा नभए पनि सेयर किनबेच हुन सक्ने देखिन्छ ।
यस अर्थमा अब देश बाहिर बसेका नेपाली नागरिकले पनि विदेशमा नै बसेर सेयर किनबेच गर्न सक्ने छन् । तर यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली र सेयर दलालको माध्यम प्रयोग हुन्छ । लगानीकर्ताले कुनै सेयर दलालकोमा अनलाइन सेयर किनबेच गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
उक्त दलालले उपलब्ध गराउने अन्य विबरण तथा प्रकृयाका आधारमा लगानीकर्ताले कुनै पनि स्थानबाट सहजै सेयर कारेबार गर्न सक्ने छन् । अहिलेको जस्तो सेयर बेचे पछि डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप दलालकोमा पुर्याउनु पर्ने, चेक लिन तथा बुझाउन जानु पर्ने प्रकृया नहुने भएकाले लगानीकर्ताले अब आधुनिक शैलीमा सेयर कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माणको जिम्मा दिएको वाइको प्रलिले पनि कात्तिक २१ बाट अनलाइन सेयर कारेबार गराउन सबै आधार तयार भएको बताइसकेको छ । Mero Laganiबाट
भिडियोमा हेर्नुहोस्, नेप्सेका आईटी प्रमुख निरञ्जन सिंह नायकको अनलाइन कारोबार सम्बन्धि बिस्तृत व्याख्या